Home Wararka Gudaha Daawo: Muqaal DJFS Soomaaliya oo iclaamisay maalinta loo fariisanayo imtixaanka dugsiyada sare
Daawo: Muqaal DJFS Soomaaliya oo iclaamisay maalinta loo fariisanayo imtixaanka dugsiyada sare
Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Soomaaliya ayaa shaacisay in 18-ka bishaan Juun loo fariisa doonaa imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare.
Agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf ayaa sheegay in dhaqaalaha lagu qaadayo imtixaanka uu balan qaaday Madaxweyne Xasan Sheekh, isagoo waqti kooban u qabtay maamulka iskuullada aysan ardaydoodu qaadan Roll Numberka imtixaanka dowladda.
Wuxuu sheegay in wasaaraddu ay si weyn uga mahad celinayso Madaxweyne Xasan sheekh Maxamuud oo dadaalka uu ku bixiyay in sanadkaan uusan baaqan imtixaanka fasalka 12-aad ee dugsiyada sare oo bil ka hor ay wasaaradu shaacisay in dhaqaale la’aan ay heysato.
Wasaaradda Waxbarashada waxay u mahadcelinaysaa boqolaalka iskuul ee Gobolka Banaadir iyo Gobolada dalka ee qaatay kaar aqoonsiga ah ee imtixaanka fasalka 12-aad ee (Roll Number) waxayna ku wargelinaysaa iskuulada aan weli qaadan kaarka aqoonsiga imtixaanka inay qaataan kama danbeys 04/06/2022,” ayuu yiri Agaasime Ismaaciil.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Carab ayaa kol-hore sheegay in wasaaradu ay weysay dhaqaale ay sanadkaan ku qaado imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare, taas oo walaac badan dalka ka abuurtay
Madaxweynaha dalka Xasan Sheekh ayaa dadaal badan ku bixiyey in sanadkaan uusan baaqan imtixaanka ay qaado dowladdu ee dugsiyada sare, wuxuuna wasaaradda maaliyadda ka dalbay inay bixiso kharashka imtixaanka lagu qaadayo, sida uu shirkiisa jaraa’id ku shaaciyey Agaasimaha waaxda taciliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Ismaaciil Yuusuf Cusmaan.
Previous articleSaciid Deni ra’iisul wasaare ma ku heli doonaa kaalintiisii isbedalka dalka mise dagaal labaad ayaa loo diri doonaa?
Next articleBeesha reer Ugaas oo maanta ku shirtey Mogadishu edeymo waaweyne dusha ugga tuurtay Xildhibaan Mohamed Abdulqadir .
Sababaha keenaya in Sri Lanka ay qarka u saaran tahay inay...
MD Xasan Sheekh oo sheegay in DFS wadin abaabul ka dhan...
Dalalka Yurub oo walwal ka muujiyay tallaabo uu qaadi rabo ruushka